Ka xoog badan Duufaanta: Dis (karti), Awood, iyo Saaxiibtinimo Daba-Durka Dabaylaha ka dib - Gargaarka Musiibada ee Labada Dhinac
Ka xoog badan Duufaanta: Dis (karti), Awood, iyo Saaxiibtinimo Daba-Dugsi ka dib duufaantii Florence
Home/updates/Ka xoog badan Duufaanta: Dis (karti), Awood, iyo Saaxiibtinimo Daba-Dugsi ka dib duufaantii Florence
"Waan baqay, hore ayaan u ogaa inaan lahaa Jackie, shaqo 24 / 7. Walaashay waligeey gurigey ku noolaan laheyd. Iyagu ma aysan siin lahayn daryeelkeeda. Waxaa sii dheer iyadu waa walaashay. Waxaan u badnaayey 12 / 13 markii aan bartay inaan quudiyo iyada, beddesho xafaayadda. Ma arkin iyada oo meelna aadeysa… gacmahaygu way buuxaan. Wax yar ayaa iga dhacay. Laakiin waan xoog badnaa. Waxay ahayd inaan noqdo, ”Pam ayaa yidhi. Waxaan sameyneynaa wixii aan sameynay. Waan ka badbaaday. Waan ka badbaaday. Waan nool nahay. Waan neefsanaynaa. ”
La kulan Pam Lewis. Pam wuxuu ka mid ahaa halyeeyadii badnaa ee Hurricane Florence. Inkasta oo ay naafonimo nafteeda leedahay, Pam waxay walaasheeda ku xaqiijisay curyaanka maskaxda ee aan hadli karin ama socon karin, iyo wiilkeeda, oo sidoo kale leh naafo ah si badbaado leh uga daadgureeyay daadadkii Hurricane Florence. Markii martida loo yaqaan Pam isbitaal la dhigay, Pam iyo qoyskii waxay ku noqdeen gurigoodii daadadku. Caaryada ayaa joogtay, qaboojiyaha hawada ayaa burburay, korontada kama shaqeynin meelaha qaar waxayna u dhaqaaqeen sidii halis dabeed guriga oo dhan. Pam waxay sugtay oo waxay si dhab ah u daawatay FEMA gurigeeda. Markii ay soo wacday gabadha dambe ee loo yaqaan 'FEMA', waxay dhaheen gurigeedu wuxuu ahaa mid aan la gaari karin.
Pam waxay socodsiisay balanqaadyo jabtay, xafiisyada xafiisyada, iyo caqabado kale oo fara badan oo sharaf iyo nimco leh, marwalbana waxay ku adkeysaneysaa in kuwa ay jeceshahay loola dhaqmo ixtiraamka ay mudan yihiin. Dadka waayeelka ah iyo dadka naafada ah waxay aad ugu dhow yihiin dadka guud in loo dilo musiibo. Hay'addu waxay kordhisaa nuglaanta. Pam way fahamsan tahay arintan, waxayna ku adkaysatay inay tahay daryeele walaasheed, cadaabta ha noqotee ama biyo sare.
Vanessa Bolin, oo ah qaban qaabiyaha wadaniga ah ee ka shaqeeya Gurmadka Musiibada ee Mutual Aid Disaster Relief ayaa si xamaasad leh u qaribtay hadalada ay ka dhiibteen Facebook ee isku dayay inay dadka iska indhatiraan. Vanessa waxay heshay faallo ay qortay saaxiibkeed Pam waana ay gaartay. Wax yar ka dib, Vanessa waxay abaabushay laba qof inay raacaan: Gerome iyo Jimmy, si ay u hubiyaan Pam iyo qoyskeeda.
Jimmy iyo Pam waxay isla markiiba saaxiibo noqdeen.
Jimmy sidoo kale wuxuu leeyahay naafo, in kasta oo uu soo xiganayo Mashruuca Icarus isagoo caddeeyay in waalli aanu ahayn cudur laga takhalusi karo, laakiin "hadiyad khatar ah" oo la beero laguna daryeelo. In kasta oo laga helay cudurka laba-cirifoodka iyo cudurka dhimirka ee xaqiiqada looga baxo, Jimmy waa tabaruc firfircoon oo xiriiriyana Barnaamijka Gargaarka Musiibooyinka ee Mutual Aid. Erayadii Jimmy: “Annagu riyooyin kuma lihin shil. Waxaan haynaa himilo si aan ugu aragno iyaga jiritaankooda. Marka abuur uu furmo, waxay dareemi kartaa dhimasho. Laakiin runtii, waa nolosha soo socota. Mararka qaarkood burburka, lumitaanka, iyo dhaawacyada, waxay u dhaqmi karaan si isku mid ah. Mararka qaar waa musiibo oo aan ku soo koobi karno awood aan la qiyaasi karin ama aan ku jiri karin. ”
Pam iyo Jimmy labadaba, waxay ka heleen awood qarsoon halista nuglaanshahooda.
Toddobaadka dambe ee soo socda, Jimmy iyo mutadawiciin kale ee Mutadawiciinta Musiibada ah ayaa nadiifiyey burburka, waxay keeneen agabyo la codsaday, waxay la xiriireen shaqsiyaadka kale iyo ururada si loo sameeyo dayactirka lagama maarmaanka u ah guriga Pam si mar kale loogu noolaado, oo laga caawiyo dib-u-hagaajinta caaryada, oo la bixiyo qol hoteel oo loogu talagalay Pam, walaasheed, iyo wiilkeeda ilaa ay si nabadgelyo ah ugu laabtaan gurigooda. Laakiin saaxiibtinimada iyo isku xirnaanta la aasaasay ayaa laga yaabaa inay xitaa xitaa aad uga sii badan yihiin Pam iyo Jimmy labadaba.
Midnimadu waa ay kaga duwan tahay samafalka taas bedelkeed kuwa wax bixiya gargaarka, iyo kuwa tabarta daran ee tabarucayaasha ah, kaqeybgalayaashu dhamaantood way gartaan dulmiga ay wadaagaan iyo doorka uu ku leeyahay badbaadada iyo wanaagga. Waa isbeddel, is-faa'iido leh, iyo geedi socod buuxin leh. Wadajiritaanku waa abuurista cilaaqaad run ah iyo saaxiibtinnimo.
"Waxaan u maleynay Hurricane Matthew inuu ahaa hal jeer nolosha oo dhan," ayuu yiri Pam. Hurricane Florence ayaa daadadku gurigeeda xitaa ka sareysay Hurricane Matthew labo sano ka hor. Waxay yiraahdaan waxbaa sii xumaanaya. Waxa kaliya oo aan sameeyo ayaa ah inaan qaato maalin uun hal jeer isla markaana sida ugu fiican aan u awoodo.
Gawaarida Pam waxaa burburiyay Hurricane Matthew labo sano ka hor. Pam wuxuu aruuriyey caruusadaha Barbie, wali xaaladooda, nolosheeda oo dhan. Ururkeedii oo dhan waxaa burburiyey daadadka Hurricane Florence. Pam ayaa yidhi, "Waa uun waxyaabo, oo leh geesinimo xoog iyo xigmad leh.
Iyagu waa uun waxyaabo. Xaqiiqdii, waxba lagama qaadan karo aakhirka, marka laga reebo aqoonta aan halkaas ku wada joognay midba midka kale. Way ka sii xumaan kartaa. Waxaa laga yaabaa inay jiraan daadad iyo masiibo noocyo badan leh oo leh baaxad weyn iyo baaxad weyn oo aanan garanaynin halka laga bilaabo. Annaga ahaan, waxay naga caawineysaa inaad uun ku booddo oo aad sameyso hal shay, hayeeshee wax yar. Isla markaana si lama filaan ah ayaanu u aragnaa kuwa kale oo sameeya wax yar oo yar iyo wax kale. Dhibcahan, si tartiib tartiib ah, waxay noqdaan bada. Waxaan kugu casuunaynaa inaad sameyso hal shey oo yar sidoo kale.
Fadlan u soo dir Barbie caruusadaha oo leh qoraal dhiirrigelin u ah Pam si ay u beddelaan agabkan lumay oo tusi in aan aqoonsaneyno xooggeeda deggan, go'aankeeda, iyo quruxdeeda. Xirmooyinka waxaa looga hadli karaa:
Jacayl iyo wada jir
2018-11-03T13:11:53-04:00Oktoobar 31st, 2018|updates|